Computing Computing, toy ny Minority Report | Martech Zone
Alarobia 16, 2006 Asabotsy, Aprily 16, 2016 Douglas Karr
Mivoatra haingana ny teknolojia ny zazalahy! Tsy azoko antoka hoe firy aminareo no mahatadidy an'i Tom Cruise ao amin'ny Minority Report, izay nandalovany fampahalalana tamin'ny alàlan'ny fampisehoana virtoaly. Ity ny topi-maso mampiseho ny vokany manokana:
Roa taona lasa izay, dia vokatra manokana fotsiny. Ity misy horonantsary misy ny zava-misy vaovao momba ny teknolojia miaraka amin'ny fanazavana ny fomba fiasan'izy io:
Afaka mahita ohatra tsara kokoa ianao ao amin'ny Eon Reality's tranonkala.
Tags: computing interaktiftatitra vitsy an'isaMpampiasa interface
Mitantara na mampiseho mifanohitra amin'ny fandraisana anjara